सेन्ट पीटर्सबर्गमा un अविस्मरणीय दरबारहरू यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | के हेर्ने, Rusia
तपाईले रूसलाई चिन्न सक्नुहुन्न जुन पनी जानुभएको छैन सेन्ट पिटर्स्बर्ग। मस्को राजधानी, उत्तुंग सोभियत शहर हुन सक्छ, र तपाइँ जे चाहनुहुन्छ, तर सेन्ट पिटर्सबर्ग आज २१ औं शताब्दीमा पनि छ, शाही शहर.
यसका दरबारहरू एक भन्दा अर्को सुन्दर छन् र जब तपाईं यसको असंख्य पुलहरू पार गर्नुहुन्छ, धेरैले भन्छन कि यो भेनिस जस्तो छ, तिमीले जान्यौ किन पीटर महान्ले यसलाई मन पराउनु भयो। यति धेरै दरबारहरू भारी छन् तर यहाँ हामी तपाईंलाई एउटा चयन छोडदछौं सेन्ट पीटर्सबर्गमा पाँच दरबारहरू जुन तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्न। साइन अप गर्नुहोस्, भ्रमण गर्नुहोस् र रमाउनुहोस्!
1 जाडो दरबार
2 मेनशिकोभ दरबार
3 मार्बल दरबार
4 युसुपोभ दरबार
5 येलागिन प्यालेस
आज यो हवेली भएको छ राज्य Hermitage संग्रहालय त्यसैले हामीले यसलाई हाम्रो सूचीमा पहिलो स्थानमा राख्यौं किनकि यो अन्तर्राष्ट्रिय कोटीको संग्रहालय हो। यसका साथै यो पनि हो विश्वको सबैभन्दा ठूलो कला संग्रहालय र केहि कोठा शोरूममा परिणत भएको छ, जबकि अन्य पुरानो इम्पीरियल रूसको शैलीमा पुनर्स्थापित गरियो।
यहाँ तपाईंले कामहरू पाउनुहुनेछ दा भिन्ची, पिकासो, रेम्ब्रान्ड र फर्नीचर र संरचनाहरू, विन्डोज, सीढी, फर्श, छत, एक अद्भुत सम्पत्ती को। रोमन मोज़ेक थपिएको छ, प्रसिद्ध सुन मयूर घडी, क्याथरिन आफैले प्राप्त गरेको उपहार, सुनौलो कोठा ...
मूल दरबार प्रारम्भ देखि मिति शताब्दी XVIII र यो पेद्रो अल ग्रान्डेको परिवारको हो, तर एकै शताब्दीभरि यसमा केही संशोधनहरू भए जबसम्म उनका एक वंशजले बारोक शैलीमा सुधार गरेन जुन आज खडा छ। कार्यहरू १ 1735 मा समाप्त भए तर केही वर्ष पछि नयाँ भागहरूले तिनीहरूको उपस्थिति परिवर्तन गरे। नतिजा एक भव्य दरबार भित्र र बाहिर थियो।
उनले रूसी क्रान्ति देखेका थिए, कुनै न कुनै रूपमा भोग्नु परेको थियो र १ 1917 १। मा राष्ट्रियकरण गरिएको थियो र पछि दोस्रो विश्व युद्ध र यसको विनाश पछि, पुनर्स्थापनाहरू शुरू भयो। शीतकालीन दरबार द्भोर्ट्सोवाया स्क्वायर, २ मा अवस्थित छ। टिकट दरबारमा भ्रमणको दिनमा खरिद गरियो र फरक मूल्यहरू छन् ठिक छ, उही टिकटले तपाईंलाई बिभिन्न दरबारहरूमा प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईं पनि किन्न सक्नुहुन्छ टिकट अनलाइन र तिनीहरू १ 180० दिनको लागि मान्य छन्। प्रत्येक महिना प्रवेश गर्ने पहिलो आइतवार व्यक्तिगत आगन्तुकहरूको लागि निःशुल्क हो।
यो दरबार १ XNUMX औं शताब्दीको सुरुदेखि हो र हो ढु p्गामा निर्मित पहिले राजमहल मध्ये एक। मेनशिकोभ पीटर ग्रेटको सबैभन्दा मिल्ने साथी थिए र शहरको पहिलो गभर्नर जनरल थिए। उनको कथा एक गरीब करोडपतिको हो जब पेस्कोले उनलाई किशोरावस्थामा भेटे पछि मस्कोको सडकमा पाइप बेच्दै थिए। क्लासिक गरीब मानिस ओलिगार्चमा परिणत भयो, अन्तमा धेरै धनी मान्छे तर केही अशिक्षित, जस्तो उसको आलोचकहरू र शत्रुहरूले भने।
मेन्शिकोभ प्यालेसलाई विदेशी कूटनीतिज्ञहरू र द्वारा भारी भेट भयो पिटर ग्रेट र क्याथरिन पहिलो बीच भव्य विवाहको लागि ठाउँ थियो सन् १ 1712१२ मा। जार मेनशिकोभको मृत्यु पछि उनले आफूले सकेजति गरे कि उनको श्रीमतीलाई शक्ति हस्तान्तरण भयो र दुई बर्षसम्म भन्न सकिन्छ कि रूस उनको मुट्ठीमा थियो जब उनले आफ्नी छोरीको उत्तराधिकारीसँग विवाह गरे। सिंहासन। दुर्भाग्यवस त्यो विवाह पछि उनीमाथि राजद्रोह र मुकुट लुटिएको आरोप लगाइएको थियो र उहाँलाई आफ्नो सम्पूर्ण परिवार सहित आकर्षक साइबेरियामा पठाइयो।
१ 1918 १। सम्म दरबार एक सैन्य विद्यालय थियो र १ 60 s० को दशकमा यो हर्मिटेजको हातमा गयो। यसको अंदरूनी सुन्दर ढंगले पुनर्स्थापना गरिएको छ र यसले घरहरू एक गर्दछ रूसी हस्तकलाको धनी संग्रह १ 10 औं शताब्दीको सुरुदेखि नै। यो मंगलबार, बिहिवार, शनिबार र आइतवार बिहान १०::30० देखि :18:०० बिहान र बुधवार र शुक्रवार बिहान :21: ०० सम्म खुल्छ। यो सोमबार र मे १ र on मा बन्द हुन्छ। सम्झनु!
महल एक्लै हेर्न ry०० रूबल खर्च हुन्छ र सम्पूर्ण कम्प्लेक्सको लागि 300०० रूबल जान्छ। नि: शुल्क प्रवेश प्रत्येक महिना र डिसेम्बर of को पहिलो बिहिवार हो।
यो चैम्प डी मार्सको कुनामा र नेभा नदीमा छ। यो सेन्ट पीटर्सबर्गमा र सबैभन्दा सुन्दर दरबार हो एन्टोनियो Rinaldi द्वारा निर्माण गरिएको थियो, देश मा neoclassicism को एक प्रतिपादक। मूलतः दरबार एक अधिकारी, काउन्ट ग्रिगोरी ओर्लोभले निर्माण गरेका थिए, जसले आफ्नी स्वास्नी, क्याथरीन ग्रेटको पक्षमा पिटर तिसलाई गद्दीमा बसालेका थिए। धन्यबादको रूपमा उनले उनलाई पैसा दरिलो दरबारमा निर्माण गर्न प्रयोग गरिन् जुनमा उनीहरू प्रयोग गरिएको थियो Different२ बिभिन्न संगमरमरहरू, त्यसैले नाम।
यी हवेलीहरू बनाउने र सजाउने कुरा दुई वा तीन बर्षमा सम्पन्न हुने कुरा होइन त्यसैले शाही पक्षलाई कम्तिमा एक दशकसम्म सुरक्षित गरिनुपर्दछ…। ओर्लोभले केही हासिल गर्न सकेन, त्यसैले काम समाप्त भएको दुई वर्ष पछि उसले छोड्नुपर्‍यो र उनका उत्तराधिकारीहरूले पनि रमाउन सकेन किनभने सार्वभौमले उनको नातिलाई किनेका थिए। यसरी सन् १17१ of को क्रान्तिसम्म यो शाही परिवारका युवाहरूको शाही निवास बन्यो।
सत्य यो हो कि त्यहाँ केही शैली परिमार्जनहरू थिए: १ 1843 मा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू भयो र गथिक र पुनर्जागरण विवरण मूल संस्करणमा अनुपस्थित। आज प्यालेन्स मिलियाना Ulitsa Street, //१ मा छ। यो प्रत्येक दिन बिहान १० देखि साँझ5सम्म र सोमबार साँझ 1 सम्म खुल्छ। मंगलबार बन्द छ।
यो भल्लीन डे ला मोथेको कार्य हो, फ्रेन्च वास्तुकार जसले १ 1760० मा यसको आकार दियो। महल प्रसिद्ध छ किनकि यहाँ रुसी साम्राज्य ईतिहासको अन्धकार चरित्र, रसपुटिनको हत्या गरियो, १ 1916 १ in मा। यस विषयले उनको छोराको हेमोफिलियाको उपचारबाट ट्सरिनामा ठूलो प्रभाव पारेको थियो र धेरैलाई हटाउन चाहने खतरा भएको थियो, जुन उनीहरूले विष वर्षको डिसेम्बर १ 17 मा विषाक्त खानाले गरे। आज रसपुतिनलाई समर्पित विशेष प्रदर्शनी रहेको छ।
युसुपोभ परिवार एक धेरै धनी परिवार थियो र उनीहरूको दरबार आजको बाँकी रहेको प्रमाण हो। यो मोइका नदीमा छ यद्यपि यो मूल उनी द्वारा निर्माण गरिएको थिएन, यो १ 1830० मा अधिग्रहण गरिएको थियो। यो दरबार प्रत्येक दिन बिहान ११ बजेदेखि बेलुका from सम्म खुला रहन्छ। प्रवेश लागत ru०० रूबल र रसपूतिन प्रदर्शन तपाईंले थप 400०० रूबल तिर्नुहुन्छ।
यो दरबार यो टापुमा छ र यो कार्लो रोसी द्वारा निर्माण गरिएको थियो, एक युवा वास्तुकार जसले इटालीबाट लाई माया मन पराउँथे नियो क्लासिक शैली। इवान येलागिन महान् क्याथरीनका लागि एक राजनैतिक व्यक्ति थिए र उनका उत्तराधिकारीहरूले राजदरबारलाई महल बेचे शाही परिवारलाई सम्राट अलेक्ज्याण्डरको आमाको ग्रीष्मकालीन निवास.
महललाई लेनिनग्रादको घेराबन्दीको बेला खराब गरीएको थियो तर २० औं शताब्दीको s० को दशकमा यो बिल्कुल पुनर्स्थापित भयो मूल फोटोबाट जुन संरक्षित गरिएको थियो। सन् १ 1987 .XNUMX देखि दरबार नै हो सजावटी र एप्लाइड आर्ट्स को संग्रहालय दोस्रो तल्लामा जबकि बेसमेंटमा रोसी द्वारा गरिएको पुनर्स्थापनालाई समर्पित एउटा विशेष प्रदर्शनी रहेको छ।
येलागिन दरबार दैनिक बिहान १० देखि साँझ 10 सम्म खुल्ला हुन्छ र सोमबार र प्रत्येक महिनाको अन्तिम मंगलवारमा बन्द हुन्छ। प्रविष्टि यसको सुन्दर पार्कमा केवल सप्ताहन्तमा प्रवेश गर्न चार्ज गरियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » सेन्ट पीटर्सबर्गमा un अविस्मरणीय दरबारहरू